के हो किम जोङले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिका लागि ल्याएको कोल्ड नूडल ?
Sun, Oct 17, 2021 | 08:43:42 NST
Posted: Friday, Apr 27, 2018 17:17 PM (3years ago )
वैशाख १४ – दुई कोरियाबीचको ऐतिहासिक सम्मेलनमा किम जोङ उनले प्योङयाङबाट ल्याएको कोल्ड नूडल आकर्षणको केन्द्र बन्यो ।
यो परिकार सम्मेलनका लागि किमले विशेष रुपमा ल्याएका थिए । नेता किमले प्याकेटकोभन्दा ताजा नूडल स्वादिलो हुने हुनाले नूडल बनाउने मेसिनसहित शेफ पनि सँगै ल्याएका थिए ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले त्यो नूडल दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे इनका लागि ल्याएको बताए । उनले भने, ‘मैले समाचारमा धेरैले यो परिकारको बारेमा कुरा गरेको थाहा पाएँ । त्यसैले राष्ट्रपति मूनका लागि मैले प्योङयाङबाट नूडल बोकेर ल्याएँ ।’
किमले राष्ट्रपति मूनलाई नूडल चाख्न आग्रह गर्दै भने, ‘अप्ठेरो नमान्नुहोस्, राष्ट्रपति मूनज्यू हामीले तपाईँका लागि भनेर प्योङयाङबाट ल्याएको नूडल चाख्नुहोस् ।’
किमले कोल्ड नूडल दूरीका हिसाबले धेरै टाढाबाट ल्याएको तर भावनात्मक हिसाबले नजिक भएकाले टाढा भन्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिले दक्षिण कोरियामा तरंग नै ल्याइदियो । दक्षिण कोरियाका रेष्टुराँहरुमा कोल्ड नूडलका लागि लामो लाइन लागेको थियो । ६५ वर्षपछिको ऐतिहासिक मिलन वा भेटवार्ताभन्दा कोल्ड नूडलले सामाजिक सन्जालमा बढी चर्चा पायो ।
प्योङयाङ नेङमेयोन नामले चिनिने योे नूडल फापरको पीठोबाट बनेको नूडलको एउटा परिकार हो । सामाजिक सन्जाल ट्विटरमा कोल्ड नूडल ह्यासट्याग उत्तर र दक्षिण कोरियाली सम्मेलनभन्दा बढी ट्रेण्डिङमा रहेको छ ।
के हो नेङमेयोन कोल्ड नूडल ?
प्योङयाङको मुख्य रेष्टुराँहरुमा पाइने कोल्ड नूडल फापरको पीठोबाट हातैले तयार गरिएको कोरियाको एक लोकप्रिय परिकार हो । यसलाई बीफ, चिकेन वा पोर्कको सुपसँग सर्भ गरिन्छ भने यसलाई किम्ची, काँक्रो, अचार वा मासुले टपिङ गरिएको हुन्छ । कोल्ड नूडल नाम अनुसार नै चिसो नै उपभोग गरिन्छ ।
दक्षिण कोरियामा नेङमेयोन भनिने यो कोल्ड नूडललाई उत्तर कोरियामा भने रेङम्युनका नामले चिनिन्छ ।